Mayelana neGreatpool story-china insizakalo yenkampani yokubhukuda - Iphuli Enkulu
(EKUQALENI) UMQEQESHI KANYE NOMDALISI WEZINTO EZINGAKUMBI ZOKUSWIMING.
Ekuqaleni kokusungulwa, inkampani yethu, njengeningi lezinkampani zemishini ye-pool yaseShayina, inikeze amakhasimende izesekeli nemishini yokubhukuda. Besingumkhiqizi kanye nabaphakeli bempahla yedamu lokubhukuda elihlanzekile. Kumakhasimende ethu, besingumkhiqizi nomphakeli kuphela, singashintshwa nganoma yisiphi isikhathi.
(SHINTSHA) YENZA UCWANINGO LWEZIMKETHI, YONKE INTO IMEKO YEKHASIMENDE
NgoLwesine ntambama, ikhasimende laseRussia uMnu Vito lithumele umlayezo kumphathi webhizinisi lethu futhi linethemba lokuthola izixazululo eziphelele zephrojekthi yedamu lokubhukuda. Ngemva kokuxhumana okulula, sahlela inkomfa yevidiyo ngekhono eliphezulu futhi ngokushesha sabhala umklamo wakhe wokuqala ngaphandle kwemingcele yolimi.
Phakathi nomhlangano wamahora amabili kuphela, Siphendule umbuzo wekhasimende, safunda ngezidingo zalo ezijulile, futhi sanquma ukukhokha kusengaphambili ukubambisana komklamo.
Kamuva, uMnu Vito wasitshela ukuthi usexoxisane nezinkampani eziningi futhi wabeka izidingo ngaphambi kokusithumelela imiyalezo, kodwa zonke zinokushiyeka okuhlukahlukene. Ezinye izinkampani zihlinzeka kuphela ngemishini yokubhukuda, noma izinsizakalo zokuklama kuphela, noma Ukuxhumana KwamaShayina kuphela. Abakwazi ukuxhumana namakhasimende ngempumelelo futhi bantula ithimba lochwepheshe elihlinzeka ngamapulani okwakha kanye nesevisi yangemuva kokuthengisa.
Singasabela kakhulu futhi sibanzi. Emahoreni amabili nje kuphela, sesixazulule izinkinga eziningi ezinye izinkampani ezidinga ukuxhumana naye isonto noma inyanga. Siphinde siziqonde kahle izimfuno zakhe futhi sibenze baneliseke kakhulu ngamasevisi ethu nokusebenza kahle.
Ukuhlanganisa izidingo zamakhasimende aphesheya kwezilwandle kanye nempendulo ecacile evela ekhasimendeni laseRussia kulesi sikhathi, siqala ukubona ngokucacile ukuthi kunzima kubanikazi bamachibi okubhukuda abaningi abangaba phesheya, osonkontileka nabaklami ukuthola izimpendulo eziqondene nawe kuzo zonke izici mayelana nekhono lephrojekthi nokuthuthukiswa. ukusekela.
Kunezinkampani eziningi zemishini yokubhukuda e-China ezingahlinzeka ngemikhiqizo, kodwa azikwazi ukuhlinzeka ngosizo lwenkonzo yolwazi lwephrojekthi; inganikeza ukwesekwa kokuklama, kodwa ayikwazi ukunikeza umkhiqizo nokuxhumeka okugcwele; ingahlinzeka ngosekelo lwezokwakha, kodwa ayikwazi ukuhlinzeka ngesevisi yangemva kokuthengisa. Banezindleko zokuxhumana eziphakeme futhi abanalo ithimba lebhizinisi elichwepheshile laphesheya ukuze babe nesikhathi esengeziwe namandla okusebenzisa ekuxhumaneni, okunciphisa ukusebenza kahle kwephrojekthi iyonke.
Ngakho-ke, inkampani yethu iqala ukumisa umnyango othile ukuze iqashe amathalente aphelele ukuze inikeze amakhasimende insizakalo yokubhukuda eqediwe.
(MANJE) SINGABAHLANGANISI BENKONZO ESIGXELE EZINGXOXULENI ZONKE ZAMAPROJEKTHI E-SWIMMING pool, SINIKEZA AMAKHASIMENDE NGEMPENDULO ENGABALULEKILE YOKUHLELA IPHROJEKTHI, UKUKLANYWA NOKWAKHIWA.
Inkampani yethu inethimba elizinikele lokumisa idokodo eligcwele ngaphandle kwemingcele yolimi
ithimba lokuklama lisekela umqondo wohlaza, ukuvikelwa kwemvelo, ezempilo, nokusebenza kahle ukuze linikeze ukwesekwa komklamo wephrojekthi.
Ithimba lezokwakha elineminyaka engu-15 yesipiliyoni sephrojekthi liqeda konke ukwakhiwa nokugcinwa kahle;
Ithimba le-ejensi kulo lonke elaseNingizimu-mpumalanga ye-Asia liphendula zonke izidingo zesondlo zangemva kokuthengisa ngesikhathi esifanele.
Wonke amaphrojekthi okubhukuda ahambisana nayo yonke imithetho yendawo futhi aqedwa ngesikhathi nangesabelomali.
Umgomo wethu uwukusiza amakhasimende ukuba afinyelele impumelelo yamaphrojekthi echibi lokubhukuda, futhi anikeze ukusekelwa okuphelele kusukela ekuklanyweni, ukuhlinzekwa komkhiqizo kuya kubuchwepheshe bokwakha.
Manje, sesihlanganyele ezinhlelweni ezingaphezu kwe-100 zokuxazulula amachibi okubhukuda emazweni angu-35 nasezifundeni emhlabeni jikelele ezihlanganisa iThailand, iRussia, i-Uzbekistan, iVietnam, iMalaysia, iPhilippines, i-Indonesia, i-India, ne-Saudi Arabia.
Iphrojekthi Yephuli Yokubhukuda, Isixazululo sePublic Swimming Pool, Isevisi ye-Swimming Pool, Inkampani ye-Swimming Pool, Isixazululo se-Outdoor Swimming Pool, I-Infinity Edge Swimming Pool,